Union Minister for International Cooperation attends Groundbreaking Ceremony of the US Embassy Liaison Office in Nay Pyi Taw – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The groundbreaking ceremony of the Liaison Office of the Embassy of the United States of America was held on 10 April 2019, at 3:30 pm, at Hilton Hotel in Nay Pyi Taw. At the ceremony, the Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin and US Ambassador Mr. Scot Marciel, delivered their opening remarks.
In his opening remarks, Union Minister U Kyaw Tin congratulated the US Ambassador Mr. Scot Marciel for the groundbreaking ceremony of the US Embassy Liaison Office in the capital city of Nay Pyi Taw and welcomed the move asasignificant first step towards relocation of the US Embassy to Nay Pyi Taw. It demonstrated the desire of the US Embassy to work closer with the government of Myanmar, and the presence of its Liaison Office in the capital city will provide better opportunities for the Embassy to engage with the officials of various line Ministries and members of parliaments to further strengthen the bilateral relations and cooperation between the two countries. The Union Minister also encourages all Diplomatic Missions and UN Agencies in Yangon to take similar steps to relocate their Office to the administrative capital to facilitate their closer engagement and coordination with the line Ministries.
Present also at the ceremony were Nay Pyi Taw Council member U Nyi Tun, senior officials from the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Home Affairs, Nay Pyi Taw Development Committee, US Embassy officials and other invited guests.
It was learnt that 16 Embassies have already reservedatotal of 29 plots out of 88 plots of land allocated for Nay Pyi Taw Diplomatic Zone. Two Embassies have already leased lands and three Embassies have made or undergoing negotiations for exchange of land. The Embassy of the People’s Republic of China has already opened its Liaison Office in Nay Pyi Taw since September 2017 and new United Nations Office housing various UN Agencies was inaugurated in Nay Pyi Taw in July 2018.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နေပြည်တော်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အမေရိကန်သံရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး ပန္နက်တင်အခမ်းအနား တက်ရောက်
(၁၀-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နေပြည်တော်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အမေရိကန်သံရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး ပန္နက်တင်အခမ်းအနားကို ယနေ့ ၁၀-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၅၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Hilton Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Mr. Scot Marciel တို့က မိန့်ခွန်းများ အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော် နေပြည်တော်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အမေရိကန်သံရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး၏ ပန္နက်တင်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်းအတွက် အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Mr. Scot Marciel အား ဂုဏ်ပြုဝမ်းမြောက်ကြောင်းနှင့် ယင်းမှာ အမေရိကန်သံရုံး နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည့် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကကျသော ပထမခြေလှမ်းတစ်ခုအဖြစ် ကြိုဆိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့ ဆက်ဆံရေးရုံး ဖွင့်လှစ်မည့် အစီအစဉ်မှာ နေပြည်တော်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို သည့် အမေရိကန်သံရုံး၏ ဆန္ဒကို ဖော်ပြနေကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ မြို့တော်တွင် ဆက်ဆံရေးရုံး ရှိနေခြင်းအားဖြင့် သံရုံးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများ ပိုမိုရရှိလာပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တိုးမြှင့်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားသံရုံးများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်သို့ ၎င်းတို့၏ ရုံးများကို ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရေး အလားတူ ဆောင်ရွက်သွားကြရန်လည်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးညီထွန်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ အမေရိကန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အခြားဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
လက်ရှိတွင် နေပြည်တော် သံတမန်ဇုန်ရှိ မြေကွက် (၈၈) ကွက်အနက် သံရုံးစုစုပေါင်း (၁၆)ရုံးမှ မြေကွက် (၂၉)ကွက် ရွေးချယ်အဆိုပြုထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ သံရုံး (၂)ရုံးမှ မြေကွက်များ ငှားရမ်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားပြီး သံရုံး(၃)ရုံးအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်မြေလဲလှယ်ရေး စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း၊ နေပြည်တော်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်ဆံရေးရုံးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကတည်းက ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ အများအပြား ပါဝင်သည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးကိုလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လက ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။